China 10V Dimmable Led Driver, Led Pwm Driver, Constant Current Driver Dimmable Manufacturer and Supplier
Nkọwa:10V Onye ọkwọ ụgbọala nwere ike ime,Pudm Driver,Onye Ọkwọ ụgbọala Ugbu a Na-aga n'ihu,,,
Home > Ngwaahịa > Ọkwọ ụgbọala na-edozi > 0-10V / PWM / RX Dimming Driver
Ngwaahịa nke 0-10V / PWM / RX Dimming Driver , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, 10V Onye ọkwọ ụgbọala nwere ike ime , Pudm Driver suppliers / factory, wholesale high-quality products of Onye Ọkwọ ụgbọala Ugbu a Na-aga n'ihu R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
0-10V Dimming Ọ bụrụ na ịkwọ ụgbọala 60W na-eduzi ya  Kpọtụrụ ugbu a
0-10V dimming PWM dimming led driver 25-42V 1500mA  Kpọtụrụ ugbu a
0-10V Dimmer Gbanwee Ike Ntanye aka  Kpọtụrụ ugbu a
Atọ na Otu Dimming Ọkwọ ụgbọ ala  Kpọtụrụ ugbu a
0-10V Dimming Ọ bụrụ na ịkwọ ụgbọala 60W na-eduzi ya
Nkọwa: Usoro HW60W-02 na-arụ ọrụ site na ntinye ọsọ ọsọ 90 ~ 305 Vac. Nkeji a ga - enye aka 1.5A nke mmepụta na ugbu a na volta voltage nke 286 V maka ike 60 W kachasị. A haziri ha iji rụọ ọrụ nke ọma na nke a pụrụ ịdabere na ha. Ụdị njirimara...
Ọ maara mmadụ niile, a na-eji ọkụ ọkụ na-eji ọkụ ọkụ eme ihe na ngwa ngwa n'ụlọ na ngwa ahịa dịka ha na-enye ike ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma, na-enwe obere mmepụta ọkụ ma dị na agba dị iche iche. Ogwe ọkụ eletrik na-enyekwa ìhè dị ọkụ ma malite...
0-10V Dimmer Gbanwee Ike Ntanye aka
Atọ na Otu Dimming Ọkwọ ụgbọ ala Ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ nke ọma na-enwe ike ịchịkwa ugbu a nke na-agafe site na Dọmịlị ma nwee ike ijikọta n'ime ugbochi ugbua iji gbasaa ndụ nke ndị ọkụ n'onwe ha. A na-achọta arụmọrụ a na ọtụtụ ihe dị...
Atọ na Otu Dimming Ọkwọ ụgbọ ala
China 0-10V / PWM / RX Dimming Driver Ngwa
Ndị ọkwọ ụgbọala ndị nwere ike ịme ihe nwere ike ime ka ìhè ọkụ na-esi na 100% ruo 0%. Ndị ọkwọ ụgbọ mmiri nwere ike ime ka ndị na-acha ọkụ na-acha ọkụ ghara ịda mbà site n'ibelata oge dị ugbu a, mgbazigharị nhazi ngwa ngwa (PWM) site na njikwa dijitalụ, ma ọ bụ usoro ndị ọzọ siri ike. Ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na-eji usoro PWM. N'iji usoro a, ugboro nwere ike ịnwe site na otu narị ngbanwe site na nkeji ruo otu narị otu narị puku ngbanwe ọ bụla kwa ụbọchị, nke mere na ọkụ na-apụta ìhè na-aga n'ihu n'enweghị ọkụ.
Ka ọ dị ugbu a, ihe kachasị eji LED dimkpa ike: LED thyristor dimming ike, LED 0 / 1-10V dimming ike, PWM dimming ike ọkọnọ. Ọrụ ndị ọzọ na-egbuke egbuke site na ịchịkwa ugbu a na voltaji, ugboro ugboro nke mmepụta iji mezuo ọrụ dimkpa.
10V Onye ọkwọ ụgbọala nwere ike ime Pudm Driver Onye Ọkwọ ụgbọala Ugbu a Na-aga n'ihu